Ike kinetic: kedu ihe ọ bụ, gịnị ka ọ bụ na kedu ka esi gbakọọ ya | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 08/10/2021 10:00 | Ciencia
Na isiokwu physics nke ụlọ akwụkwọ ahụ Ike kinji. A na -ewere ya dị ka otu n'ime ihe dị mkpa maka mmegharị ihe. Agbanyeghị, ọ na -esi ike ịghọta ma ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọmụma gbasara physics.
Yabụ, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ike kinetic na ihe bụ isi ya bụ.
1 Kedu ihe bụ kinetic energy
2 Ngụkọta oge nke kinetic ume
3 Ndị agha metụtara
5 Ihe atụ bara uru
Kedu ihe bụ kinetic energy
Mgbe a na -ekwu maka ụdị ike a, ndị mmadụ na -eche na ọ bụ ume a na -enweta iji nweta ọkụ eletrik ma ọ bụ ihe yiri ya. Kinetic ume bụ ume nke ihe nwere n'ihi mmegharị ya. Mgbe anyị chọrọ ime ka ihe dị ngwa, anyị ga -etinye akwụkwọ ike ụfọdụ iji merie esemokwu nke ala ma ọ bụ ikuku. Maka nke a, anyị kwesịrị ịrụ ọrụ. Ya mere, anyị na -ebugharị ike na ihe ahụ ma ọ nwere ike ịkwaga na ọsọ ọsọ.
Ọ bụ nke a ebufere ike akpọ kinetic energy. Ọ bụrụ na ume etinyere ihe ahụ na -abawanye, ihe ahụ ga -eme ngwangwa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị akwụsị itinye ike na ya, ike kinetic ya ga -eji mgbarụ ọkụ belata ruo mgbe ọ kwụsịrị. Ike kinetic na -adabere oke na ọsọ nke ihe ahụ.
Ahụ ndị nwere oke ibu chọrọ obere ọrụ iji malite ịkwaga. Ngwa ngwa ị na -aga, ka ahụ ike gị na -enwe. Enwere ike ibufe ume a na ihe dị iche iche na n'etiti ha ka ọ gbanwee ka ọ bụrụ ụdị ume ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ na -agba ọsọ wee daa onye ọzọ nọ na -ezu ike, a ga -enyefe onye ọzọ akụkụ nke ike mmegharị ahụ nke dị n'ime ọsọ. Ike a ga -etinyerịrị maka mmegharị ga -adịrịrị karịa ike esemokwu na ala ma ọ bụ mmiri ọzọ dị ka mmiri ma ọ bụ ikuku.
Ngụkọta oge nke kinetic ume
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbakọ uru ume a bara, anyị ga -eso echiche a kọwara n'elu. Nke mbụ, anyị na -amalite site n'ịchọta ọrụ arụchara. Ọ na -ewe ọrụ iji nyefee ike kinetic n'ime ihe ahụ. Ọzọkwa, n'ịtụle oke ihe a na -akwali n'ebe dị anya, ọrụ ga -amụba n'ike. Ike ahụ ga -abụrịrị elu ya ka ọ dị, ma ọ bụghị ya, ihe ahụ agaghị agagharị.
Ka e were ya na ị chọrọ ịkwaga igbe, ma ị na -amanye ya n'ala. Igbe ahụ agaghị enwe ike imeri nkwụsị nke ala ma ọ gaghị agagharị. Ka ọ na -agagharị, anyị ga -etinyerịrị ọrụ na ike na ntụnyere ya na elu. Anyị ga -akpọ ọrụ W, ike F, oke nke ihe m, na anya d. Ọrụ ya na ike oge dị anya. Nke ahụ bụ, ọrụ a rụzuru dị ka ike etinyere na ihe ahụ na anya ọ na-agagharị na-ekele nke ike ahụ e tinyere. A na-enye nkọwa nke ike site na oke na ngwangwa nke ihe ahụ. Ọ bụrụ na ihe ahụ na-agagharị na ọsọ mgbe niile, ọ pụtara na ike a na-etinye n'ọrụ ya na ike esemokwu nwere otu uru ahụ. Ya mere, ha bụ ikike ndị a na-etinye na nguzozi.
Ndị agha metụtara
Ozugbo ike etinyere na ihe ahụ belatara, ọ ga -amalite ibelata ruo mgbe ọ kwụsịrị. Ihe atụ dị mfe bụ ụgbọ ala. Mgbe anyị na -anya ụgbọ ala n'okporo ụzọ, korota, unyi, wdg. Okporo ụzọ na -enye anyị nguzogide. A na -akpọ mmegide a esemokwu n'etiti wiil na elu. Ka iwelie ọsọ nke ụgbọ ala, anyị ga -agba mmanụ ọkụ ka ọ mepụta ike kinetic. Site n'ike a, ị nwere ike imeri esemokwu wee malite ịkwagharị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị ejiri ụgbọ ala kwaga ma kwụsị ime ngwa ngwa, anyị ga -akwụsị itinye ike. Na enweghị ike ọ bụla n'ụgbọ ala, ike esemokwu agaghị amalite breeki ruo mgbe ụgbọ ala ahụ kwụsịrị. Ya mere, ọ dị mkpa inwe ezi nghọta maka ike nke sistemụ itinye aka iji ghọta ntụzịaka ihe ahụ ga -aga.
Ya mere, mgbe a na -arụ oke ego na ihe, ego anyị na -akpọ kinetic energy k na -agbanwe.
Maka ndị ọkà mmụta physics, ịghọta ike kinetic nke ihe dị mkpa maka ịmụ ike ya. E nwere ụfọdụ ihe elu -igwe nọ na mbara igwe nke nwere ike kinetic nke Big Bang na -akwalite ma ka na -aga n'ihu ruo taa. N'ime usoro mbara igwe niile, enwere ọtụtụ ihe na -atọ ụtọ ị ga -amụ, ọ dịkwa mkpa ịghọta ike ike ha iji buo amụma usoro ha.
Mgbe anyị lere anya nha anya ike kinetic, anyị ga -ahụ na ọ dabere na square nke ọsọ nke ihe ahụ. Nke a pụtara na mgbe a gbara okpukpu abụọ, ike ya na -abawanye ugboro anọ. Ọ bụrụ na ụgbọ ala na -aga 100 km / h, ume ya dị okpukpu anọ nke ụgbọ ala na -aga 50 km / h. Ya mere, mmebi nwere ike ibute n'ihe mberede ji okpukpu anọ karịa nke ihe mberede.
Ike a enweghị ike ịbụ uru na -adịghị mma. Ọ ga -abụrịrị efu ma ọ bụ nke ọma. N'adịghị ka ya, ọsọ nwere ike inwe uru dị mma ma ọ bụ adịghị mma dabere na ntụnyere. Mana mgbe ị na -eji ọsọ nwere akụkụ anọ, ị na -enweta ezigbo uru.
Ihe atụ bara uru
Ka e were ya na anyị nọ na klaasị mbara igwe ma anyị chọrọ itinye akwụkwọ bọọlụ n'ime ebe ahịhịa. Mgbe anyị gbakọtachara anya, ike na trajectory, anyị ga -etinye ụfọdụ ike kinetic na bọọlụ iji wepụ ya n'aka anyị gaa na ahịhịa ahịhịa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị ga -agbalite ya. Mgbe bọọlụ akwụkwọ hapụrụ aka anyị, ọ ga -amalite ito ngwa ngwa, ọnụọgụ ike ya ga -agbanwe site na efu (mgbe anyị ka nọ n'aka) ruo X, dabere n'otú o si erute.
N'ọkụ ọkpọ, bọọlụ ahụ ga -erute oke ike nke kinetic ozugbo ọ rutere ebe kachasị elu. Site n'ebe ahụ, ka ị na -amalite mgbada gị na ebe mkpofu ahịhịa, ike kinetic gị ga -amalite ibelata ka ike ndọda na -adọpụ ya wee gbanwee ka ọ nwee ume. Mgbe ọ rutere na ala mkpofu ahịhịa ma ọ bụ ala wee kwụsị, ọnụọgụ nke ume kinetic nke bọọlụ akwụkwọ ga -alaghachi na efu.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ike kinetic na ihe njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ike kinji